Baratooni Oromoo Magaaloota Oromiyaa Adda Addaa keessatti Maastar Pilaanii Fifinnee Mormaa jiru – YEROOBLOG
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	 November 26, 2015 December 25, 2015 1 Minute
Torbe kana keessa baratoonni Oromoo sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalota Oromiyaa, Amboo, Gincii fi Mandii keessatti Maaster Pilaanii Finfinnee, hojiirra oolchuu mootummaan Itoophiyaa ADWUItiin durfamu akka dhaabu hiriira nagaa bahuudhan gaafachaa jiru. Mormiin kun gara magaaloota Oromiyaa kaanattis akka babala’achuu danda’u ni eegama. Magaalonni Oromiyaa baratoonni mormi itti kaasan poolisii Oromiyaa fi Poolisii Federaalaatiin marsamanii eegamaa jiru. Haga yoonaa, mormii godhameerratti miidhaan lubbuu namaarra ga’e jiraachuu baatus, baratooni hedduun humna mootummaatiin qabamanii akka hidhaman gabaafameera.
Kanaan duras (bara 2014), baratooni Oromoo yunvarsiitii adda adda keessa barachaa turan Maastar Pilaanii Finfinnee kana mormuun hiriira nagaa bahun isaanii ni yaadatama. Haata’u malee, baratoonni kun humnoota mootummaatiin haleelamani; baratoonni dhibba tokkoo ol ta’an yeroo ajjeefaman, baratoonni hedduun reebamanii balaa cimaaf saaxila bahaniiru; kaan immoo mana hiidhaatti naqamaniiru. Kanneen mana barumsaa irraa ariiyamanis hedduu dha.
Maastar Pilaaniin Finfinnee, gandootaa baadiyaa 200 ol fi magaaloota 36 Godina Addaa Oromiyaa Naannaawwaa Finfinnee keessa jiran gara Finfinneetti makuuf karoora bahe dha. Haata’u malee, Oromoota biratti Maastar Pilaaniin kun fudhata hin argannee. Sababni isaas, lafa Oromoo bulchinsa maagaala Finfinne jala galchuudhaan Oromonni lafa isaanii maqaa invastmantiitiin akka dhaban gochuudha. Qotee bultoota Oromoof qarshii xiqqoo laachuudhaan lafa isaanii uummaatoota bira (warra kaabaa) fidanii lafa Oromoorra qubachiisuuf yaalii godhamaa jiru waan ta’eefi. Oromoon lafti isaa irraa fudhatamee jennaan, jiruuf jireenyi isaa ni jeeqama; afaaniifi aadaan isaa ni bada ;akkasumas daangaan Oromiyaa cabe bulchinsa Finfinneef kennama. Walumaa galatti, Oromoon abbaa biyyumaa isaa nisarbama jechudha.
Mormiin guddaan uummata Oromoorra isa mudatus, mootummaan ADWUI karooricha hojiirra oolchuuf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Gaaffi uummataa kabajuu hindandeenye. Mootummaan kun karooricha hojiirra oolchuu hindhaabu taanaan uummanni Oromoo mirga isaa falmachuuf yeroo kamiyyuu caalaa qophaa’aadha. Baratoonni Oromoos, hiiriira mormi gochaa kan jiraniifi kanumaafi. Hamma gaafffiin Oromoo deebii argatutti, mormii fi fincilla itti fufa.
Published November 26, 2015 December 25, 2015
Previous Post Zone 9 Bloggers, honored with CPJ’s 2015 International Press Freedom Award
Next Post BBC Approves Afan Oromo as one of the Languages Used to Broadcast to Ethiopia